Su'aalaha La Weydiiyo - Shirkadda Nc Isa Industry Iyo Shirkadda Ganacsiga
Waxaan nahay shirkad isku dhafan wax soo saar iyo ganacsi, oo ay ku jiraan warshadaha iyo ganacsiga isdhexgalka ganacsiga.
Sidee ayey warshaddaadu ugu sameysaa xakamaynta tayada?
Tayada ayaa ah mudnaanteenna, waxaan sameyn lahayn xaqiijin horay-u-soo-saar ah sida hubinta dharka, acceossies iyo tirada iyo qaababka daabacaadda iyo daabacaadda, shaybaarka horay loo soo saaray ee loo diro oggolaanshaha. Kahor soo saarida, QA-dayadu waxay tilmaam siin doontaa warshadda ama aqoon isweydaarsiga si ay fiiro gaar ah u yeeshaan qodobbada muhiimka ah ee amarkan. Kadibna waxaan sameyn doonnaa sharaf weyn oo kormeer on-line ah si aan ugu qancinno 1-kaST wax soo saarka jumlada ayaa u qalma; Ugu dambeyntiina, markii wax-soo-saarka ballaaran dhammaado, waxaan sameyn doonnaa baaritaankayaga QC-da ee gudaha ah si aan u sameynno warbixin rasmi ah iyo haddii loo baahdo, waxaan sidoo kale kuu soo diri karnaa shaybaarro wax soo saar badan si loo xaqiijiyo kama dambaysta ka hor rarka.
Ma heli karaa hal muunad? Miyaan ku bixiyaa?
Haddii aan haysanno dhar ama shaybaarro la mid ah, waxaan ku soo diri karnaa muunad bilaash ah. Haddii aad leedahay qaab cusub oo aad ku horumarin karto, waxaan soo aruurineynaa qiimaha muunad jees jees ah. Qiimaha dhoofintuna waa kharashkaaga. Qiimaha muunada ayaa laga soo celin doonaa wax soo saarka badan.
2-7 maalmood oo muunad ah iyo 10-30 maalmood wax soo saar ballaaran; Tirada laga soo diyaariyey 1,000 kumbiyuutar ilaa 10,000 kumbuyuutar waa qiyaastii 30 maalmood. Hadday ka badan tahay 10,000pcs, waxay u badan tahay inay noqon lahayd 45 -60 maalmood.
Ma magacaabi karaa midabka ama ma yeelan karaa astaan ​​u gaar ah badeecada?
OEM & ODM waa la soo dhaweynayaa. Taasi waa hal-ku-dhiggeenna ah: ADIGU AAD QAADISAY, ISA CUNTO.
Waxaad noo soo diri kartaa dharkaaga jirka si aan u nuqul ka sameysano ama waad noo sheegi kartaa midabada pantone no.
Ama waxaan heli karnaa qaabkaaga, ka dibna u hel midabka xiran si aad u xaqiijiso tirada badan.
Sidee loo kormeeraa sheyga inta lagu jiro wax soo saarka?
Waxaan leenahay waaxda QC si aan u raacno alaabta ceyriinka ah iyo kormeerka dhammeystiran.Qalabka kormeerka gaarka ah ee shaybaarka si loo sameeyo QAAR ka mid ah baaritaannada lagama maarmaanka ah sida soonka midabka iyo yaraanshaha dharka; Kormeer kasta oo 3aad ah haddii loo baahdo runtii waa la soo dhaweynayaa.
Waa maxay shuruudaha bixinta?
Waxaad ku bixin kartaa lacagta TT, Paypal, L / C iwm.
Waa maxay sheygaaga ugu caansan?
Dhawaan, khad dheer oo leh funaanad ragga ah oo qalooca ayaa ugu caansan; Mesh qallalan mesh leh qaab sublimation sidoo kale aad u kulul dhawaan.
Badanaa, waxaan aqbali karnaa 100 kumbiyuutar / qaab. Laakiin haddii QTY ay ka badnaan karto 1000 kumbiyuutar, qiimaha wuxuu noqon lahaa mid tartan badan.
Ma leedahay hanti-dhawr?
Our factoy waxay leedahay BSCI, Disney FAMA, Sedex, Wal-mart, Marvel, Abid Uruurinta Aduit.
Maxay yihiin shuruudaha ganacsigaaga?
Waxaan sameyn karnaa EXW, FOB, CIF, DDP. Hada USA, sicirkayaga DDP-ga ah ayaa kugu habboon adiga.